Faa’idada galmada u leedahay lamaanaha. – Hagaag.com
Faa’idada galmada u leedahay lamaanaha.
Posted on 11 Agoosto 2015 by Admin in Home // 0 Comments
Daraasad baa waxay sheegtey lamaanaha is qaba haddii ay isu galmoodaan isbuucii hal ilaa labo jeer waxay kor u qaadaa waxa afka qalaad lagu yiraahdo (immunoglobulin A). sida la ogyahay IgA waa khadka koowaad ee difaaca jirka, shaqadiisuna waxaa weeye inuu la dagaalamo waxyaabaha soo weerara jirka.
Iyadoo laga helo ubad.
Waxay horumarisaa difaaca jirka.
Wadnaha ayey caafimaad u tahay, lamaanaha haddii ay si joogta ah isu arkaan isbuuci ugu yaraan 2 jeer, 45% ayuu ka wadno xanuun yaryahay kuwa bishii hal mar is arka, waxay isu dheeli tirtaa tirada maadooyinka (estrogen iyo testosterone), taasoo muhim u ah caafimaadka wadnaha.
Dhiiga cadaadiskiisa ayey hoos u dhigtaa.
Waa jimicsi faa’ido badan leh, waxay gubtaa calories ama dhaaqo, waxay xoojisaa murqaha, daraasad cusub ayaa waxay tibaaxdey inay galmada gubta halkii daqiiqo 4 calories oo ragga ah iyo 3 calories oo haweenka.
Xanuunka ayey daawo u tahay, waxay yareeysaa hormoonada xanuunada sababa, dhabarka, lugaha, iyo lafaha xanuuna ayey daweeysaa, xanuunka caadada wey yareeysaa, madax xanuunka oo goon jabka Soomalida tiraahdo iyo qandhada galmadaa u daawo ah.
Waxay yareysaa khatarta xanuunka (cancer) ka (prostate), cilmi baaris ayaa tilmaantey biyaha ama (sperms) kaa baxa 21 jeer bishii ugu yaraan, waxay yareysaa khatarta cancerka prostate ka.
Hurdada ayey badisaa, labadan hormone oo la kale yiraahdo (prolactin iyo oxytocin) waxay sababaan hurdo camiiq ah.
Waxay baab’isaa stresska, waxay kordhisaa sacaadada ama farxada iyo deganaan laabta ah.
Waxay kor u qaada hamigaaga, irmaan aan gurin bey kaa dhigtaa, waxay haweentana ka difaacdaa jeermiska, biyaha ragga ayaa dettol u ah ama mudhahar, dhiiga jirka ayey si caadi ah u socodsiisaa.
Waxay kordhisaa xiriirka lamaanaha, waxay ka dhex abuurtaa maxaba, mowadah iyo naxariis ama raxma.
Waxaan halkaan ku xusey waa qeyb ka mid ah faa’idooyinkeeda, qofkii moodey inay arrintaasi sahlan tahay, ma sahlana.
Waxaan ku soo koobayaa qiso wiil fariid oo Suudani ah iyo waalidkiisa, wiilkan yar wuxuu arkaa mararka qaar waalidkiisa oo dagaalamaya, kadibna gala qol ayagoo faraxsanna ka soo baxa, sanooyin kadib dagaalkooda waa batey oo joogto ayuu noqdey, kadib wiilkii ayaa hooyadiis wuxuu weydiiyey, hooyo waagii hore markaad dagaashaan qolka aa isku soo xiri jirteen idinkoo faraxsan oo qoslayana waad soo bixi jirteen, hadda maxaa dhacey? Hooyadii baa waxay ku tiri, wiilkeygow wixii na maslaxeyn jirey ayaa dhintey.